မွမွကြွပ်ကြွပ်နဲ့အရသာပြည့်နှက်နေတဲ့ကြက်ကြော်ကို တစ်တုံးဝယ်တစ်တုံးလက်ဆောင်နဲ့စားနိုင်မယ့် – FoodiesNavi
By yin sandi On June 11, 2018 0
ကြက်ကြော်ကောင်းကောင်းလေးကို ဈေးတန်တန်နဲ့ရနိုင်မယ့် မြောက်ဒဂုံကကြက်ကြော်ဆိုင်လေးအကြောင်း အစားတစ်လိုင်းတို့ကိုလက်တို့ပေးမယ်နော် ? ဆိုင်ဖွင့်တာတစ်လတောင်မပြည့်သေးပေမယ့် လူသိတော်တော်များလောက်အောင် ဆွဲဆောင်ထားတိုင်တဲ့ဆိုင်လေးမို့ အစားတစ်လိုင်းတို့အကြိုက်တွေ့မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဆိုင်နာမည်လေးကတော့ “Chalawan(ချာလဝမ်)”ဖြစ်ပြီး ကြက်ကြော်ကိုအဓိကရနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ကြော်ကိုမှ ရိုးရိုး ၊ အစပ် ၊ လီမွန်အစပ်ဆိုပြီးရနိုင်ဦးမှဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ပုံကြီးဆို(၁၂၀၀) ၊ ရင်ပုံသေးဆို(၁၀၀၀) ၊ ပေါင်(၈၀၀)ကျပ်တွေဆိုတော့ ဈေးကတော့စွန်းတန်တယ်နော် ? ဇွန်လကုန်ထိလည်း (၁)တုံးဝယ်(၁)တုံးလက်ဆောင်ရနိုင်ဦးမယ်ဆိုတော့ ? ? လမကုန်ခင်မြန်မြန်သွားစားကြည့်ကြနော် ? ကြက်ကြော်မာရိုနိစ့်(၁၅၀၀) ၊ ကြက်ကြော်သုပ်(၁၅၀၀) ၊ ကြက်ဆီထမင်း(၂၀၀၀) ၊ ခေါက်ဆွဲပေါင်း(၂၀၀၀) ၊ ထမင်းပေါင်း(၂၀၀၀) ၊ ကြက်နှမ်းကပ်(၂၀၀၀) ၊ အာလူးချောင်းကြော်(၅၀၀)စတာတွေကိုလည်း ရနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟမ်ဘာဂါလည်း(၂၀၀၀)ကျပ်တည်းနဲ့ ဆူဆူဖြိုးဖြိုးအထပ်လိုက်ကြီးကို အားပါးတရစားနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သားတွေကမာမနေဘဲ မွမွလေးနဲ့အိအိလေးဖြစ်နေတော့ ဝါးလို့ကောင်းစားလို့ကောင်း ? ကြက်သားအတွင်းထဲထိ အရသာတွေစိမ့်ဝင်နေသလားထင်မှတ်ရအောင် အရသာကဂွတ်ရှယ်ပဲ ? Promotion လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ တစ်တုံးဝယ်ပြီးနှစ်တုံးအပီအပြင်စားလို့ရပြီဗျို့ ? Chalawan ရဲ့လိပ်စာကတော့ ကျောင်းလမ်းမှတ်တိုင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးမှတ်တိုင်ကြား ၊ ပင်လုံလမ်းမပေါ်(မဟာရန်ကုန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကပ်ရပ်) ၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။